Psalmen 148 HTB - Nnwom 148 ASCB
Monkamfo Awurade mfiri ɔsorosoro,
2Nʼabɔfoɔ nyinaa, monkamfo no,
3Owia ne ɔsrane, monkamfo no,
nsoromma a ɛhran nyinaa, monkamfo no.
4Monkamfo no, ɔsoro mu ɔsoro
ne mo nsuo a mowɔ ɔsoro atifi.
ɛfiri sɛ ɔno na ɔhyɛeɛ na wɔbɔɔ wɔn.
na wahyɛ nʼasɛm a ɛrentwam da.
7Monkamfo Awurade mfiri asase so,
mo, ɛpo kɛseɛ mu abɔdeɛ ne ɛpo bunu nyinaa,
8anyinam ne asukɔtweaa, sukyerɛmma ne omununkum,
ahum a moyɛ nʼapɛdeɛ,
9mo, mmepɔ ne nkokoɔ nyinaa,
nnua a ɛso aba ne ntweneduro nyinaa,
10wira mu mmoa ne anantwie,
abɔdeɛ nketewa ne nnomaa a wɔtuo,
mo, mmapɔmma ne asase sodifoɔ nyinaa,
12mmeranteɛ ne mmabaawa
mmasiriwa ne mmɔfra nso.
na ne din so sene edin biara;
nʼanimuonyam korɔn wɔ asase ne ɔsoro so.
14Wapagya abɛn bi ama ne nkurɔfoɔ,
ama nʼahotefoɔ nyinaa animuonyam,
Israelfoɔ, nnipa a wɔda nʼakoma so no.
ASCB : Nnwom 148